KPAL Ihe nkiri Mkpuchi Ihe Nkiri Software-Akụkọ-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
KPAL Mpempe Ihe Mbelata Nkiri Mkpa Esere
KPAL nkiri izizi software nwere a ọkachamara software mmepe na ọrụ otu. O guzobela nchekwa data zuru oke zuru oke iji mesoo nhazi data na arụ ọrụ nke ụdị ọhụrụ dị iche iche n'oge ọ bụla maka adịghị ike nke sọftụwia ịbelata ihe nkiri na-emekarị na ahịa, dị ka obere nchekwa data, ụdị mismatch, na ihe isi ike na hemming.
Na ndabere nke n'ịhụ ngwa ngwa ịkpụ na mfe owuwu, KPAL Akụrụngwa FILM na-agba mbọ ka ọ bụrụ nke zuru oke, ngwa ngwa, ziri ezi, mgbanwe na ọnụ ala:
1.Ebe nchekwa data zuru ezu
Otu n'ime ihe ndị kasị keukwu agba nchebe film ụkpụrụ ọdụ data, ekpuchi a usoro nke data ụdị maka agba, ime ime, ọkụ ihu, ọgba tum tum, electronic ngwaahịa, wdg, adabara ihe fọrọ nke nta niile pụrụ ichetụ n'echiche ụdị na ụdị.
2.Ụdị ịkpụchasị mma
The eke ala nke ihe nkiri na ụgbọ na-maximized,-enweghị isi na-agbatị na distortion na-ezere, na mmetụta nke curvature ahụ na-achịkwa iji hụ na zuru okè alignment na ozu mpempe akwụkwọ metal.
3.Oke ngwa ngwa na melite ọsọ
Nzaghachi ngwa ngwa na mkpa ndị ahịa, ndị ọrụ injinia ngwanrọ ga-emecha mmelite na nzaghachi n'ime awa 48 mgbe ị nwetasịrị faịlụ nyocha 3D nke ụgbọ ala ọhụrụ n'okpuru ebe n'ihu na mmepe nke data eserese ọhụrụ maka ụgbọ ala ọhụrụ ahụ. Mee "China Speed" ruo oke.
Iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa, ịkwado ndị ọrụ ka ha dezie data n'enweghị nsogbu na ngwa ngwa, na mezie hemming. N'otu oge ahụ, a na-ahazi nhazi nke ụgbọ ala ahụ dum, na-edozikwa ihe ncheta hemming. Enwere ike mezue mkpa dị iche iche na-enweghị ọrụ mgbagwoju anya. Adreesị vidiyo ọrụ.
5.Ezigbo njikwa ọnụ ahịa
Nhazi ihe nkiri mara mma nwere ike iji inch ọ bụla nke ihe nkiri mee ihe n'ụzọ zuru oke, belata ọnụ ahịa ịcha, ma chekwaa ma ọ dịkarịa ala mita 2 kwa ụgbọ ala ma e jiri ya tụnyere ịkpụ aka.
Iji meziwanye ihe owuwu ahụ, ụgbọ ala ọ bụla nwere ike ịchekwa ma ọ dịkarịa ala awa 2 nke oge owuwu.
6.48-Ụzọ n'efu elekere
48-Ọkaibe n'iji KPAL Akụrụngwa FILM nwere ike iwetara gị nloghachi ka mma na itinye ego. Iji nyeghachi ndị mmekọ anyị ma mee ka ha ghọta ngwanrọ anyị nke ọma, anyị na-enye gị ụdị nnwale efu.
Ihe nkiri KPAL sọftụwia precut na-agbaso nkà ihe ọmụma azụmahịa nke China iji mezue usoro ịkpụ ihe nkiri dị nso na ụwa. Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.